MAQAL:Maamulka Gob.Banaadir oo ka digay fasahaad ka socda xeebaha Muqdisho – SBC
MAQAL:Maamulka Gob.Banaadir oo ka digay fasahaad ka socda xeebaha Muqdisho
Posted by editor on Janaayo 17, 2013 Comments
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamud Nuur Tarsan ayaa digniin culus u diray dadka taga xeebaha magaalada Muqdisho, isagoo sheegay inaan maamulkiisu u dulqaadan doonin arimo uu ku macneeyey fusuq iyo fasahaad ay halkaasi ka wadaan dhalinayaro uu sheegay inay dalka dibadiisa ka yimaadeen kuwaasi oo uu ku eedeeyey inay dhaqan xumo badan ka yimaadaan xeebaha Muqdisho.
Qaylo dhaan ka soo yeertey Gudoomiye Tarsan ayuu ku muujiyey in arintan maamulkiisu aanu faraha ka laaban doonin, wuxuuna qiray in arimo aan ku wanaagsaneyn diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay halkasi ka socdaan, waxaana uu inta badan eeda dusha uga tuuray qurbo joogta booqanaysa Muqdisho gaar ahaan dhalinyarada oo dhaqamada wadamadii ay ka yimaadeen sida Mareykanka & Yurub ay la tageen xeebaha Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido, isagoo si carol eh u tibaaxay in arintaasi cid kasta oo lagu arko ciqaab adag lagu qaadi doono.
Link-ga hoose ka dhageyso qaylo dhaanta Gudoomiyaha Gobalka uu ka soo saarey dhaqan xumada ka oogan xeebaha Muqdisho.
Janaayo 17, 2013 at 9:17 pm
subxaaana laah.awalba muqdisha iyo hargaysa waxey larog madeen waxaas ayaa kamid ahaa.hadana hadey soo ceshaan wixii oo kale markale ayaa larogayaa.
Janaayo 18, 2013 at 2:47 am
meel lama magcbo hadaad dhalil smynyso isi sax yarta xge somalia aan fusuq ka dhacin wa la is yaqanaye
Janaayo 18, 2013 at 4:06 pm
aad iyo aad ayan utageeraya hadalka uu soo jeedyey gudoomiyaha gobolka banaadir waana nin dalkiisa iyo dadkiisa ufegeraaya mashalah ilaahow nasii madax dalka saas uku fagreysa…….
Janaayo 18, 2013 at 10:32 pm
Tarzan ha la qabto! Qiyaas gabdho ka yimid dalka dibaddiisa oo ku xiran saldhig ay illaalo ka yihiin askarta Xamar joogta! Qol aan iftiin lahayn, gabadh dhalinyaro ah askari mooryaan iska ah qol mugdi ah ugu xiran. Meel aan documenti iyo OB midna lahayn!!!
Ilaahow gabdhaha badbaadi. Wixii dhaca Tarzan baa masuul ka ah!